It is naive to believe that The Democratization Movement can win in Burma. To say it in plain words: Burma is in fact alreadyasatellite (dependant) state of China,
both economically, politically and military. 500,000 Chinese formakind of middle class in Burma and have the key positions in Burmese economy now.
The song which was popular during the struggle to throw off British colonialismn, “A hardship for the British, an opportunity for the Burmese”,
can now be turned to: “A hardship for the Burmese, an opportunity for the Chinese”.
In June, The Junta`s generals rolled out the red carpet for the Chinese Prime Minister Wen Jiabao in the new capital Naypyidaw. Inastatement by the 8th of June,
according to the opposition news agency “Irrawaddy News” in Thailand, Burma`s strongman, Sr. Gen. Than Shwe, said that the two countries have established
“a strategic relationship” that will clearly say that the countries in the future will work closely in political, economic and safety issues. The day after, The Junta`s
newspaper, the New Light of Myanmar, reported that China National Petroleum Corporation (CNPC) had begun the work to adda800 km long oil and gas pipeline
from the Arakan State at the western coast of Burma to be linked to the already existing network of pipelines. Washington-based “Earth Rights International”
wrote in the report “China in Burma for 2008” that even 16 Chinese oil companies have been established in Burma. Norway`s Pension Fund/Global has invested billions of NOK in Chinese oil companies.
Burma`s military counts approx. 450,000 soldiers. Both Air Force and Navy have been heavily upgraded by the help of China and Russia in the recent decades. Then, the Air Force is recently reinforced with 50 K-8 Karakorum jet fighters from China. The Junta`s pact with China does not originate in fear of external enemies, but isaresult of its repulsion on ethnic groups and democratic opposition.
China is not interested in promoting human rights in the world, not in North Korea, not in Sudan – and certainly not in Burma. The argument in The Security Council continues: “Non-interference in other countries` internal affairs”. Understandably, The Chinese Communist Party members will of course not bearahand for anybody other than themselves.
Al Jazeera showedadocumentary in May which disclosed that Burma has initiatedacollaboration on the development of nuclear weapons technology with The Democratic People`s Republic of Korea (North Korea). It also emerged that Russian technicians with expertise in this issue are involved as well. The information is exposed byaBurmese military officer who deserted after his service and involvement in this collaboration.
The Norwegian Labour Party, by its Party Secretary Raymond Johansen, has reached an agreement with The Communist Party of China to hold regular meetings in the future. The human right issues surely don`t top their agenda. We are strongly in doubt. In Norwegian-Chinese governmental relations certainly practicable politics will be largely discussed, to pave the way for BUSINESS, sugar-coated with cultural exchange. Consequently, heroic resistance of The Democratization Movement and bloody sacrifice of the ethnic minorities unfortunately fall out of consideration. One may lendahand by givingafew hundred million kronerayear to the cyclone victims and to the humanitarian organizations which through their grass root participants are doingaheroic effort to remedy that normally should be the responsibility of the government, but it sounds likeashow off.
The only way to change this pessimistic future scenario regarding democratic principles must be relieving the people inadire hardship, as we saw in the footage of the Oscar-nominated documentary “Burma VJ” about the monks` uprising, The Saffron Revolution, by means of righteous remorse.
The Karen guerrilla leader Nerdah Mya expressed the same during his visit to Gjøvik June the 6th. His statement about the upcoming election in Burma he probably shares with most of the Burmese: “I fear the worst, but I hope for the best.”
The concepts of democracy/democratic must be precisely and unambiguously defined in advance. We therefore fear that the Nobel Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi has been taken for the benefit of political forces that absolutely are not democratic. And it is the ideal praxis of The Military Junta: At all the times, despots have managed to hold on to power by using the strategy of “split and conquer”.
Political memo in advance to the election in Burma in the fall by SVEIN ELVSBORG, the chairman of “Burma Association of Gjøvik and surrounding areas” (www.bgon.info)
အရှိကို အရှိအတိုင်း မြင်စေချင်
မြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလှုပ်ရှားမှု တိုးတက်ထွန်းကားလာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆသည်ဆိုပါက နုံရာ အ,ရာ ကျပါ လိမ့်မည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေးအရပါ တရုတ်၏ လက်အောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ် အမှန်ပင် ကျရောက်နေခဲ့ပြီးသား ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် တရုတ်လူမျိုး ၅ဝဝ,ဝဝဝ ခန့်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူလတ်တန်းစားအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးလောကတွင် အချက်အချာနေရာများကို ရယူထားကြသည်။ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးခေတ်က ရေပန်းစားခဲ့သည့် သီချင်းတပုဒ်ထဲမှ “အင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာ့အချက်” ဟူသောစာသားကို “ဗမာ့အခက် တရုတ်အချက်” ဟု ပြင်ပြောလျှင် ရနိုင်ပါ လိမ့်မည်။
ယခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းက မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင် ကို နိုင်ငံ့မြှို့တော် အသစ်ဖြစ်သည့် “နေပြည် တော်”တွင် ကော်ဇောနီခင်းကာ ကြှိုဆိုခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘောထား တင်းမာသူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အတိုက်အခံ သတင်းဌာန “ဧရာဝတီ”၏ ပြန်လည်ဖော်ပြချက်အရ ၎င်းတို့ နှစ်နိုင်ငံသည် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေး တခုကို ထူထောင်လိုက်ကြပြီဟု သိလိုက်ရသဖြင့် အနာဂတ်ကာလတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် လုံခြှုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို ၎င်းတို့နှစ်နိုင်ငံသည် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်သွားကြတော့မည်ကို အတိအလင်းဖော်ပြနေပေ သည်။
နောက်တရက်အကြာတွင် စစ်အစိုးရ၏ လက်အောက်ခံ “မြန်မာ့အလင်း” သတင်းစာက တရုတ်အမျိုးသား ရေနံလုပ်ငန်းကော်ပိုရေရှင်း [China National Petroleum Corporation (CNPC)] သည် ကီလိုမီတာ ၈ဝဝ ရှည်သော ရေနံ နှင့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကို လက်ရှိ ပိုက်လိုင်းကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်သည့်လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံအနောက်ဖက်ကမ်းခြေ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖြော်ပခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန် အခြေစိုက် “Earth Rights International” အဖွဲ့၏ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွက် “China in Burma” (မြန်မာနိုင်ငံထဲမှ တရုတ်နိုင်ငံ) အစီရင်ခံစာတွင် တရုတ်ရေနံကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ထားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ပင်စင်ရံပုံငွေ(နိုင်ငံရပ်ခြားဆိုင်ရာ) [Norges Pensjonsfond/Utland] သည် တရုတ်ရေနံ ကုမ္ပဏီများတွင် သန်းပေါင်းထောင်ချီကာ ရင်နှီးမြှုပ်နှံပြီးသားဖြစ်နေလေပြီ။
မြန်မာ့ စစ်အင်အားတွင် စစ်သားပေါင်း ၄၅ဝ ဝဝဝ(လေးသိန်းငါးသောင်း)ခန့်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စု နှစ်များအတွင်းက တရုတ် နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့၏ အကူအညီဖြင့် လေတပ်ရော ရေတပ်ပါ စစ်အင်အား အဆင့် မြှင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကမှ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် 50 K-8 Karakorum ဂျက်တိုက် လေယာဉ်များကို တရုတ်နိုင်ငံမှပင် ရယူကာ အင်အားတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ ၏ တရုတ်နှင့် ပူးပေါင်းမှု သည် ပြည်ပအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရမှုကို အခြေမခံဘဲ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ နှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး ဆောင် ရွက် သည့် အတိုက်အခံများကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ရေးကိုသာ အခြေခံသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ပေးရမည်ကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားပါ။ မြောက်ကိုးရီးယားနှင့် ဆူဒန် နိုင်ငံများတွင် လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ပေးရန် မလိုလားသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်ဆိုလျှင်လည်း လုံးဝ အလှမ်းဝေးလွန်းလှသည်။ “တပါးနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်မစွက်ဖက်ရေးမူ” ကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြှုံရေးကောင်စီတွင် ဆက်လက်ငြင်းခုံနေကြဆဲဖြစ်သည်။ အလွန်သိသာ ပါသည်။ သိကြသည့်အတိုင်း တရုတ်ကွန်မြှူနစ်ပါတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ကိုယ့်တဖို့တည်းမှလွဲလျှင် မည်သူ့အတွက်မျှ ခြေဦးလှည့်မည် မဟုတ်ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံ(မြောက် ကိုးရီးယား) [Den demokratiske folkerepublikken Korea (Nord-Korea)] ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အနုမြှူလက်နက်ပူးပေါင်း ထုတ်လုပ်ရေး စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မေလအတွင်းက Al Jazeera သတင်း ဌာနမှ သတင်းမှတ်တမ်းတင်ဆက်မှုတခု ပြသသွားခဲ့သည်။ ရုရှနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအတတ်ပညာရှင်များလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ကို ဖော်ပြ ထားသည်။ အဆိုပါ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသော မြန်မာစစ် အရာရှိတယောက်ထံမှ တဆင့် ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိခဲ့သည်။
နော်ဝေနိုင်ငံ အလုပ်သမားပါတီ (Det norske arbeiderparti) သည် ၎င်း၏ အတွင်းရေးမှူး ရေမွန် ယိုဟန်ဆယ်န် (Raymond Johansen) မှတဆင့် တရုတ်ကွန်မြှူနစ်ပါတီနှင့် အရေးပါသော ပုံမှန်ဆွေးနွေး မှုများလုပ်ကာ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုများ ရယူခဲ့ကြ သည်။ များပြားလှသော ဆွေးနွေးဖွယ်အရပ်ရပ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများက ထိပ်ဆုံးတွင်နေရာယူထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ပင် သံသယဖြစ်မိသည်။ နော်ဝေ-တရုတ် အစိုးရချင်းဆက်ဆံရေးတွင် ပါးစပ်က လက်တွေ့ကျသောနိုင်ငံရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု အဆင်ပြေစေရေးတို့ကို မလွတ်တမ်း ပြောဆိုနေကြပြီး ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးဖြင့် သကာလောင်းထားသည်
။ ထိုအခါ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများ၏ ရဲရင့်ပြောင်မြောက်သောဆန့်ကျင်မှုများနှင့် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား တို့၏ သွေးချောင်းစီးပေးဆပ်ခဲ့မှုများမှာ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာ မျက်ကွယ်ပြှုခံလိုက်ရပါတော့သည်။ အာဏာပိုင်အစိုးရက တာဝန်ယူရမည့် ဆိုင်ကလုန်း ဒုက္ခသည်များကို ကူညီ ထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွင် နော်ဝေ နိုင်ငံအနေနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ရဲကိုင်ရဲသော အောက်ခြေကယ်ဆယ် ရေးလုပ်သားများ မှတဆင့် တနှစ်တနှစ် နော်ဝေ ခရိုနာ သန်းပေါင်း ရာချီပေးကမ်းနေသည်မှာ မျက်နှာပန်းလှစေရန် သက် သက်မျှသာဖြစ်ပေသည်။
ဒီမိုကရေစီအမြင်ဖြင့်ကြည့်လျှင် ကောင်းနိုင်ဖွယ်မရှိလှသော အနာဂတ်အလားအလာများကို ပြန်ပြင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းတခုတည်းသာရှိ သည်။ ၎င်းမှာ အော်စကာဆုပေးရန် လျာထားခံရသည့် ရွှေဝါရောင်သံဃာ့ အရေးအခင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်း BURMA VJ တွင် ကျွနိုပ်တို့ တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည့် အောက်ခြေပြည်သူလူထုမျိုး ကို ဒုက္ခပင်လယ်တွင်းမှကယ်တင်ကာ တရားမျှတသော အပြောင်းအလဲများ ပြှုလုပ် ပေးရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကရင် ပြောက်ကျားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် နာရ်ဒါမြ ကလည်း ယိုဗစ်မြှို့သို့ အလည်အပတ်ရောက်ခိုက် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့က အဆိုပါယူဆချက်ကိုပင် ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့သည်။ ကျင်းပရန်မဝေးတော့သည့် မြန်မာ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သူ့ သဘော ထားမှာလည်း မြန်မာအများစုနည်းတူ “အဆိုးဆုံးဖြစ်လာမှာကိုစိုးပေမယ့် အကောင်ဆုံးကို မျှော်လင့်ထားပါတယ်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဟူသောဝေါဟာရများကို လက်ဦးကတည်းက ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားရမည်။ တစိုး တစိမျှဒီမိုကရေစီ မဆန်သော နိုင်ငံရေးအာဏာများကိုသုံးကာ နိုဘဲလ်ငြိမ်း ချမ်းရေးဆုရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံရေးအမြတ် ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် အသုံးချခံရမည်ကို ကျွန်ုပ် တို့ စိုးရွံ့မိပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ရပ်မျိုးသည် စစ်အာဏာရှင်တို့ကျင့်သုံးနေကျ စံပြကျင့်စဉ် တခုဖြစ်သည်။ သက်ဦးဆံပိုင် အာဏာရှင်တို့သည် “သွေးခွဲခြင်းဖြင့် အောင်စေရာ” ဟူသော မဟာဗျူဟာကို အစဉ်တစိုက် ကျင့်သုံးကာ အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
[ယိုဗစ် နှင့် ဝန်းကျင်ဒေသ မြန်မာနိုင်ငံသားမျာအသင်း (Burmaforeningen for Gjøvik og omland) ၏ ခေါင်းဆောင် ဆဗိုင်း အဲ့လ်ဗ်စ်ဘော့ရ်ဂ် (Svein Elvsborg) ရေးသားသည့် “ဆောင်းဦးပေါက်တွင်ကျင်းပမည့် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲအကြှို နိုင်ငံရေးမှတ်စု”]
မှတ်ချက်။ ဤ ဆောင်းပါးကို ဒေါက်တာ ၀င်းမောင်မှ ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားပါသည်။